Ny Apple Watch Series 3 dia tsy hifanaraka amin'ny watchOS 9 | iPhone News
Ny Apple Watch Series 3 dia tsy hifanaraka amin'ny watchOS 9
Apple dia namoaka ny Apple Watch Series 3 tamin'ny Septambra 2017. Nanomboka teo, isan-taona dia lasa ity modely ity ny fidirana amin'ny Apple Watch ary nohavaozina amin'ny dikan-teny rehetra amin'ny watchOS navoakan'i Apple. Voaisa anefa ny androny.
Araka ny voalazan'i Mark Gurman, Apple dia handao ny Series 3 miaraka amin'ny fandefasana ny Apple Watch Series 8. Izany hoe, ny Series 3 dia tsy havaozina amin'ny watchOS 9, ny dikan-teny manaraka amin'ny rafitra fiasan'ny Apple ho an'ny famantaranandro maranitra.
Miaraka amin'ny watchOS 7, apetraho ny fanavaozana vaovao tsirairay odyssey izany, satria nangataka anay foana izy hanafaka toerana ahafahana misintona sy mametraka ny fampiharana. Miaraka amin'ny watchOS 8, mazava ho azy fa tsy nihatsara ny zava-drehetra ary manahirana ny fametrahana ny fanavaozana vaovao tsirairay.
Mihasarotra ny manolotra an'io modely io. Na izany aza, raha tsy mikasa ny hametraka fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo ianao, miaraka amin'ny fampiharana fanaraha-maso hetsika ara-panatanjahantena tafiditra Mihoatra noho ny ampy izany.
Modely Apple Watch vaovao ho an'ny 2022
Nilaza ihany koa i Gurman fa amin'ny 2022, Apple dia hanitatra ny tsipika Apple Watch miaraka amin'ny Series 8, Apple Watch SE, ary Apple Watch vaovao. Apple Watch mifantoka amin'ny fanatanjahan-tena tafahoatra.
Amin'izao fotoana izao dia toa manondro an'izany daholo ny zava-drehetra tsy hampiditra sensor ara-pahasalamana lehibe vaovao. Niresaka nandritra ny taona maromaro izahay momba ny mety hisian'ny Apple sensor mari-pana amin'ny vatana, sensor iray izay, mitovy amin'ity taranaka ity izay tsy maintsy miandry ny manaraka.
Momba ny famolavolana. Amin'ny andro mialoha ny fandefasana ny Series 7, Apple dia nanakorontana ny media ary nivezivezy ny fomba hahatongavany, endrika efajoro izay fiovana goavana raha oharina amin'ny modely teo aloha.
Na izany aza, ny orinasa Cupertino ihany nampitombo ny haben'ny efijery mba hampihenana ny sisin-tany sy hanitarana ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch Series 3 dia tsy hifanaraka amin'ny watchOS 9
Araka ny voalazan'i Gurman, ny Apple Watch Series 8 dia hanana endri-javatra vaovao maro amin'ny hetsika fanaraha-maso
Ny lehiben'ny Instagram dia mandà ny fahatongavan'ny fampiharana ho an'ny iPad amin'ity taona ity